RentaCar Club အတွက်မော်တော်ယာဉ်၏တားမြစ်ထားသောအသုံးပြုခြင်းဘာတွေလဲ?
သာကဘွတ်ကင်အောက်မှာနေစဉ် RentaCar Club ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကကားစာအုပ်ဆိုင်များနှင့်မောင်းနိုင်ပါတယ်အတည်ပြုခဲ့သည်။ မည်သည့်တားမြစ်ထားသောအသုံးပြုခြင်းမြားတှငျပါဝငျခွငျးကားများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်တောင်းဆိုမှုများများအတွက်ငှားရမ်းသူမဆိုလွှမ်းခြုံဖယ်ရှားပစ်မည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒ၏တတိယပါတီတာဝန်ယူမှုကိုလွှမ်းခြုံအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး RentaCar Club မော်တော်ယာဉ်မောင်းမှမဟုတ်တဲ့အတည်ပြု RentaCar Club drivers တွေကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အခုကျနော်တို့အနေနဲ့အတည်ပြုယာဉ်မောင်းဒါမှမဟုတ်ငှားရမ်းသဘောတူညီချက်အပေါ်ဒုတိယအမည်ရှိယာဉ်မောင်းအဖြစ်သာ hirer ကိုလက်ခံ;
အ RentaCar Club မော်တော်ယာဉ်ထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမော်တော်ယာဉ်ထက်အခြားမည်သူမဆိုတွန်းသို့မဟုတ်ဆွဲယူလာရသည်ဟုခံရဖို့ခွင့်ပြုခြင်း,
မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆိုပြောင်းလဲ, ဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်တိုးတက်မှုပြုလုပ်ခြင်း .;
လောင်စာတစ်ခုမလျော်ကန်သောအမျိုးအစားနှင့်အတူ RentaCar Club မော်တော်ယာဉ်အားပေးခြင်း,
ဘယ်လူမျိုး, pacemaking, ပြိုင်ပွဲ, လူထု, လမ်းကြောင်းရက်, စမ်းသပ်မှုတွေသို့မဟုတ်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုလမ်းပေါ်ခြင်းရှိမရှိအတွက်သုံးပါကိုခြေရာခံသို့မဟုတ်ပိတ်-လမ်း,
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်လိ, လုံခြုံရေးအတွက်မည်, သို့မဟုတ်မဆင်မခြင်အရေးမစိုက်နှင့်အတူသုံးပါ,
ထိုကဲ့သို့သောတက္ကစီသို့မဟုတ်ကှကျပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်အမြတ်ရခြင်းအဘို့အပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှု, သယ်ဆောင်ရန်သုံးပါ။ သငျသညျ, သို့သော်, ထိုကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးတွေနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသောအဖြစ်, စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်ကားကိုသုံးနိုင်ပါသည်;
ကြိုတင်စာရင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ထားပြီးမဟုတ်လျှင်ကိုသုံးပါ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲသို့မဟုတ်သင့်ကြိုတင်မှာကြားထားအချိန်အပြင်ဘက် RentaCar Club ယာဉ်များအသုံးပြုခြင်းခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်းပါဝငျ;
ကက၎င်း၏ rated စွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်ပါသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ထိုင်ခုံခါးပတ်ရှိပါတယ်ထက်ပိုခရီးသည်တင်ဆောင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသုံးပါ,
အငှားရမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းမပါဘူးဆိုရင်တစ်တရားဝင်လိုင်စင်မရှိဘဲသုံးပါ, ဒါမှမဟုတ်။ ဒါဟာသူသို့မဟုတ်သူမ၏လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့သောအခါကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားဖို့ငှားရမ်းသူများတာဝန်ရှိ၏
မဆို, မီးလောင်လွယ်အဆိပ်သင့်, မတည်ငြိမ်သော, အဆိပ်, အန္တရာယ်ရှိတဲ့သို့မဟုတ်တရားမဝင်တ္ထုများသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ကိုသုံးပါ,